गायक भीमकुसारी गर्जिए : बिवादित गीत बजारमा आएपछि प्रचण्ड र ओली झस्किए ? (हेर्नुस् पुरा भिडियो ) «
गायक भीमकुसारी गर्जिए : बिवादित गीत बजारमा आएपछि प्रचण्ड र ओली झस्किए ? (हेर्नुस् पुरा भिडियो )
प्रकाशित मिति : ११ जेष्ठ २०७६, शनिबार १८:१३
काठमाण्डौं । बर्तमान राजनीति र यथार्थ परिस्थिलाई ब्यङग्य गर्र्दै गायक भीमकुसारी गर्जिए । राजनीति फोहोरी खेल तथा किनबेचको थलो भएको औल्याउदै सधै सट्टा टिकाई राख्न उनीहरुले जे पनि गर्न सक्ने कुसारीले बताए । सबै नेता कार्यकता तथा देशभक्त बन्न खोज्नेहरु सबै घुस खोरी भ्रष्टचारी भएको छ ।
चोरी डकैती ,लुटपात,हत्या हिंशा भलात्कार जस्ता जघन्य अपराधहरु दिनानुदिन बढ्दै गएको छ । यस्तो अपराधिक क्रियाकलापमा राजनीतिको ठुलो शक्ति रहेको औल्याउदै गायक कुसारीले वर्तमान परिस्थितिलाई सुहाउने किसिमको देश भक्ति भावनाले ओतप्रोत मार्मिक गीत भर्खरै मात्र बजारमा ल्याएको छ ।